Kubatana pane kuvhuraSUSE? Aihwa Kubva kuLinux
Kubatana pane kuvhuraSUSE? Aihwa
pandev92 | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux, Noticias
Nezuro husiku, ndave kuda kurara, ndakayeuka kupinda kwandakaverenga mwedzi yapfuura, yaitsanangura kuti aibata hunhu kubatana en vhura, apa, Kubatana 2D. Mushure mekutaura kwakawanda pamablog nemaforamu, mwedzi yakapfuura uye hatina kugashira chero nhau dzepamutemo kubva vhura, pane kufambira mberi kweprojekti.
Ini pakupedzisira ndakasarudza kutaura nevakagadziri ve Kuvhura , akandipindura:
Chiteshi cheUkubatana kuvhuraSUSE hachisiri mupenyu zvekare, munhu ari kuzviita pakutanga haichadi uye zvakare kuvhuraSUSE iri kutopa akawanda desktops, pakanga pasina kukwana kwakaringana maitiro nezve rakavhurikaSUSE kubatana simba iro vamwe vakapinda mukati.
Unity port haina kurarama, munhu akaigadzira pakutanga haachafarire, uye Opensuse inopa akawanda mamiriro enzvimbo yedesktop, pakanga pasina mhinduro yakanaka kuchiteshi, kuyedza kwakapfuura vamwe.
Saka kuonekana netariro yekuona kubatana en vhura, munhu wese akasununguka kupa maonero ake, asi pakupedzisira zvinoita sekunge chete Canonical iwe unofarira kumhanya iyi tafura (goko).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Kubatana pane kuvhuraSUSE? Aihwa
Kana Kubatana kuchida katsi ina, zvirokwazvo haisi mhosva yevashandisi.
Wese munhu anoita iyi sarudzo kune chimwe chinhu.
4 katsi = Anenge munhu wese anoshandisa Ubuntu mune ayo mavhezheni neUbatana? : O XD
Ehe, vazhinji vanofarira Gnome Shell kana dzimwe nharaunda, iwe uri muenzaniso wakanaka nekuti iwe unoshandisa Kubuntu.
Ndanga ndichishandisa Kubuntu kubvira kuvapo kwekubatana kusati kwavapo, saka handikwanise kukuudza kana ndiri muenzaniso wakanaka kana kwete xD
Kubatana kune zvinhu zvaro zvakanaka, zvinondinakidza maLenses, pane chimwe chinhu chakafanana neKDE?
Kwete, zvirinani kwete izvo zvandinoziva nezvazvo
Zvaive pachena kuti izvozvo zvaizoitika. kuvhuraSUSE inharaunda nharaunda, nei yaizotsigira nharaunda isiri? Izvo izvo avo vanofarira GNOME uye vanoda kuchengetedza chiitiko chinosuruvarisa cheShell vanozowana iri yekuchengetera repamusoro neCinnamon.
Chaizvoizvo. Ndinofunga kuti Ubuntu Ini ndinofanira kurega kuisa muchigamba chakawanda, kuti kubatana inogona kushandiswa mune mamwe ma distros, senge Debian Semuyenzaniso. Ndicho chidiki chavaigona kuita.
Totally agree, kutsigira chinhu icho Ubuntu chisingatsigire vamwe, ndinofunga kwaive kutambisa nguva ...
Ini pachangu, zvandinoda ignome shell uye kubatana, kubatana kuri nyore kushandisa, zvinoitika ndezvekuti nanhasi haina "kukura" kwegnome shell kana kde, kunyangwe zvakadaro ini ndinowana malenzi uye nzira yekugarisa desktops zvakanyanya inogadzira Uye zvakare necompiz inotaridzika kunge inoshamisa, chinhu chakashata ndechekuti iri musoro kuigadzirisa, inorema uye inononoka kupfuura gnome shell uye inopa mamwe matambudziko ne compiz.
Muchitadzo, chandinonyanya kufarira inyaya yekuve nerusununguko rwekuchinja uye kushandisa akasiyana madhizaiti neUbuntu hwangu! 🙂
Pindura kuna kesymaru
Ini ndinokugadzirisa iwe, G-Shell haina kunyatso kukura, inoda kukura, asi iri munzira iri nani kupfuura Kubatana, iyo inofanira kubvumidzwa.
Kubatana hakuna kushata, chinhu ndechekuti sezvakambotaurwa, Canonical haisi kutsigira kuisa desktop iyi kune mamwe masisitimu nekuti, zvakanaka, zvinoita sekunge haina hanya. Dzimwe nguva Canonical inoita seApple kana Microsoft, asi handicho chikonzero nei Ubuntu ichifanira kupiwa mhosva, sezvinoita Ushingi nguva dzose, nekuti kune chaiko Ubuntu-based nharaunda distros, senge LinuxMint.
ufffffffffff hama yangu correctisimooo !! +100
Izvo zvandiri kutaura. Enda ku Ubuntu sekugovera, iine hombe repository, kwete senge kubatana uye pfungwa dzekuzvimiririra uye dzekutengesa (izvo zvisingaite kushoropodza) zve Maka Shuttlworth. Inogona kushandiswa Ubuntu nechero imwe nharaunda yedesktop uye voila. Hwisisa kuti chinangwa che kubatana haasi iye chete Desktop, asi inoenderera mberi: TV, Nhare, Mahwendefa ..
Kunzwisiswa ... ungati here kushandisa linux mint iri kushandisa ubuntu asi isina kubatana?
asi .. linux mint inoshandisa iyo hombe ubuntu repository ??
Ehe anoishandisa, uye anoipa yake chaiyo kubata. Ndipo pakabva Sinamoni.
ipapo tinogona kutaura kuti yakashongedzwa mhinduro kune ubuntu ndeye linux mint xD
Vanhu vakaita saUbuntu ... uye vazhinji vanomedza neUbatana (kushaya nguva7nowaziva). Izvi hazvina kufanana nekufarira Kubatana. Nyowani kuLinux inogona kubata ziso rako…. asi… kwandiri… mushure menguva yakawanda kwazvo yebudiriro ichiri inonhuhwirira, zvese zvakavhiringidzika uye kumanikidzwa kuita zvikamu zviviri zvakakosha…. uye sezvazviri kudikanwa kuti uende kuisa «zvigamba» kumasystem kuitira kuti kusangana kushande, nezvimwe, nezvimwe…. puufff.
Hupfumi hwematafura ibudiriro yeLinux uye nguva inoisa munhu wese munzvimbo yavo - Canonical ichaguma ichitsigira rini?
Chinhu chega chinondisheedza kubva Kubatana malenzi, chimwe chinhu chatichakwanisa kuona rimwe zuva mu KDE kana programmer angashinga. Nekuti chii chiri kugoverwa kwezvinhu kunogona kuwanikwa mu KDE (Icon-Tasks pano, Global Menyu ipapo uye ndizvozvo), uyezve kana iro theme yeplasma Elly yashandiswa.
kubatana ?? pfff ahahaha ndapota! Ini ndinofarira sinamoni .. handife ndakanzwisisa kuti vanhu vanogamuchirwa vakafungei pavakagadzira izvozvo .. vakatadza kuisa bhawa riya pasi dai raive doko nooo asi vakariisa kuruboshwe kuitira kuti vapinde munzira yakawanda
ndine urombo nekukanganisa kwandinoita zviperengo
Aja akaenderera mberi, chinhu chakanaka ndechekuti vakatoona njodzi yavakaita inonzi kubatana uye ikozvino vanoiziva kwazvo.
Ndiri kufara kuziva kuti mushanduro 12.04 unogona kuisa "gnome-pani" inova mhando yegnome 2 kana chimwewo chinhu chakafanana. Aya ndiwo maitiro gnome3 shell yaifanirwa kunge yakaita seizvi ... zvinoita kunge gnome 2 ... Ndine chokwadi chekuti vazhinji vacho vanozoisa iyo package ... uye kubvisa kubatana kubva pamepu mune inotevera kuburitsa. . ahaha
Zvinotaridza kwandiri kuti RAE ichave iri kutsvaga chitunha
Ushingi zvinorevei RAE?
Royal Spanish Chikoro.
Ndakafunga kuti munyika dzese dzinotaura chiSpanish vaimuziva, kunyanya kubva mumaduramazwi nezvose izvozvo.
Uye izvo muVenezuela vane girama yaAndres Bello ...
hahahaha ok ok izvozvi kana ndanzwisisa .. zvakanaka ndinokumbira ruregerero zvekare nekuda kwekukanganisa kwandinoita, chakakosha ndechekuti vakanzwisisa meseji yangu.
@ jamin-samuel ndicho chinhu chakashata, "iwe unowana iwo meseji" vazhinji havapi mhosva nezve chiperengo.
Tiri kudzokera kumashure kuperetera troll? Fuck Ushingi, zvinonzwisisika kuti iwe unofanirwa kutaura uye kunyora zvakanaka, izvo hazvirambwe, asi kune vanhu avo, kunyangwe zvichirwadza, vajaira kunyora zvakashata, uye muVenezuela ichi idenda, ndinokuudza.
Chinhu ndechekuti, kutaura chaiko, kuti kuve chiperengo troll, unodiwa mwana, hausvike chero kupi, haugadzirise kana kuita chero munhu anzwisise uye, pakupedzisira, izvo zvaunopedzisira waita zviri kunetsa mushandisi kana munhu uye murazvo wemoto unogadzirwa ... Dzikama zvishoma uye gadzirisa zvinoonekwa chaizvo.
Zvakanaka, iwe waisafanirwa kushama muromo wako chaizvo, iwe unondipa basa nezvinyorwa zvako uye Hoyganismo.
Uyezve tarisa kuti ndiani ati atange kuregererwa chiperengo.
Kwete muVenezuela chete, asi pano ini ndinozivawo ma HOYGANS vari kutaura zvinhu nenzira yeTuenti ku:
Ndiri mukuchema, pane pari? LEGO mukomana kune saiti
Izvo zvakashata zvakanyanya kupfuura izvo zvatinoona pano, uye ini ndinovashayisa asi ivo vanondiudza kuti ndiende kugehena hahahaha.
Kubatana kuchabviswa pamepu here? Kana ivo vangoburitsa vhezheni 5.8
Ini ndinofarira Kubatana (kunyangwe zvisiri zvakawandisa zvemitemo zveCanonical), kupfuura Cinammon. Ndiri kuona yakawanda mikana yekuchinjika kune akawanda mapuratifomu, ini zvakare ndinoona irinani kunaka, uye kunyangwe vazhinji vasingazvifarire, iyo Lens nyaya inoita senge inonakidza kwandiri. Ini ndinoda Xfce chiuru churu, iyo yandiri kuyedza parizvino uye yakanyatsogonesa kwandiri, kupfuura Cinammon. Kwaingova kukoshesa kwangu pachezvangu.
Izvo zvako zvako neCinnamon hazvishamise.
Kunyange zvakadaro, chiiko Chinamoni kuti iwe usade chero chinhu zvachose?
Yakapusa uye yakapusa padawan ... kubatana kwakagadzirirwa zvemazuva ano skrini muna 16: 9 fomati, mauri uine hupamhi hwakawanda ... handizive nezvako asi doko rekubatana rinoshanda uye rinoteerera, kupfuura akawanda vamwe mune linux, lens uye hud ndezvimwe zvakawanikwa kubva mukubatana, vanobvumidza yekutsvaga yekumusoro kugona kure zvakanyanya kunyangwe gnome shell, inzvimbo yakanaka kunyangwe usingaifarire, kune vanhu vanoda kufamba nekukurumidza uye vachiri havagone kunzwisisa kuti nei vachikandira tsvina yakawanda pairi ...
Kana iri sinamoni, ini handifarire zano kana kuitiswa ... pamakomputa ayo andakaedza mhedzisiro yakaipa uye haina basa kutaura kuti kutanga ... yakafanana nekopi yakaipa ye kde ... (maonero ako)
Zvakanaka, ini ndinoda kubatana zvirinani kupfuura gnome-shell uye ini ndaigara ndiri gnomer. Dhoku inoita kunge isingandinetse, nekuti inoshanda nguva dzese kuruboshwe rwechidzitiro, nekuti mabhatani ewindo aripo. Hazviratidzike sekunonoka kwandiri, kunyangwe paine magariro anorema kupfuura mamwe, zvinoita kde, kumhanya kwacho kwakaringana mukubatanidzwa kwezvishandiso zvese nemumwe. Inogona kunge isiri panacea, asi gnome-shell yaive zvakare (uye ichiri) yakashoropodzwa zvakanyanya, sekunge pakabuda kde4, pakanga pasina kwekuiwana. Zvese zvinhu kuravira uye zvipe nguva yekukwiridzwa.
Chimwe chinhu chisarudzo cheCanonical chekusachikudziridza kunze kweUbuntu, asi chirongwa chavo, uye chekutanga chichafanirwa kushanda padistro yavo, zvobva zvaonekwa
vanhu vanochinjira ku xubuntu.
Nyaya yechokwadi ...
Panguva ino muUbuntu hunotevera ivo vari kuita nepavanogona napo (uye vanozvizivisa nemufaro mukuru) kugadzirisa iyo GNOME Fallback modhiyo yavanodaidza kuti yeClassic. Handifunge kuti ndezverudo rwevashandisi varo uye kuti zvichavei .. .. zvichave nekuti ivo vari kuona nzeve dzemhumhi. Nezvandaifarira Ubuntu uye ahpra ... kuwedzera kuri nani.
Hazvingave zviri nani kuyedza nesimba, kunyangwe zvikaomarara, kuisa Gnome 3 Shell nenzira imwecheteyo? Panguva iyo yavanoona Gnome 3 Shell semukwikwidzi akaomarara kune kwavo kuita, chimwe chinhu chakakanganisika nepfungwa.
zvachose .. dai ubuntu yaisanganisira gnome shell ingadai yakabudirira .. asi pamwe vakagadzira kubatana kuzvitsauranisa pachezvayo zvishoma kubva fedora .. sezvo fedora inoshandisa gnome shell ..
nemoyo wangu muruoko rwangu .. ndingadai ndaifarira zvakanyanya kana Ubuntu ikatsigira gnome shell panzvimbo yekubatana.
Vanoziva kuti Kubatana kwave kuUbuntu izvo Windows Vista kuMicrosoft.
Uye ikozvino zvaunoziva ... chii chavachatipa isu mune ramangwana? ahahaha zvakanaka ndinovimba chimwe chinhu chakakosha
Ini ndinopokana nazvo zvakanyanya, asi ivo vachatora shit kuti vaende vachidhonza sezvavanoita kushamwari dzedu kubva kuRedmond.
Compact Menyu uye Hide Menubar: Viga bhaa remenu muThunderbird
LMDE Gadziridza Pack 4 uye Gnome 2 dzimwe nzira